ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင်”
Fair enough, bro. You know, what amazed me reading most of the Burmese blogs is that it seems as if nothing injustice has happened these days in Burma. If some foreigner care to write about what's happening right now, why can't we mention just evenasentence. But what I see is they behave like it has nothing to do with them and instead they are havingagood time on their blogs, damn!
so so pity man
I m waiting for Part-2!
I'll be waiting for part-II.
I'll be Ygn next week.
ohhhhhh.........., our house has being put on fire by SPDC bt we r still busy wz stupid debate on such kind of blog.Please shall we stop it here and we try to build understanding and respect each others so that we can move forward to participate in upcoming mass activities to get free from SPDC's slaves.
TALK LOUD IS BETTER THAN DO SOMETHING LAH..
WE DON'T WANT TO GO BACK TO MYANMAR.
WE GOT NEW HOUSE..IN SINGAPORE...!!!
WE'LL CONTINUE STILL TALK LOUD IN VERY SAFE SINGAPORE..
PLEASE UNDERSTAND ME & MY FAMILY LAH...!
I HAD NEVER EVER DO IN POLITICS IN MYANMAR BEFORE...IN MY WHOLE LIFE..
BECAUSE OF BLOG HERE, IS THE ONLY PLACE I CAN TALK LOUD..LAH..!
PLEASE TRY TO UNDERSTAND ME LAH..
စလုံးစီတီဇင် ပြောင်းမယ်ဗျာ.... ဗမာတွေကို စိတ်ပျက်တယ်......
WELCOME to Padauk Yeit Paw Institue, we'll educate you about fine politics''.
Just admit yr mistake man, u dont realized who you are, whatashame. You r doing politics think wise man.. THINK WISE...
yeah...... that's right.... anonymous....
ကိုပေါရေးတာကို ထောက်ခံပါတယ်. . .
ကျွန်တော်အပါအဝင် လုပ်ပေးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ ဘာမှ မလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်လဲ ရှက်မိပါတယ်..
လမ်းပြကြယ်ကို ဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းပြီး ကူညီပါမယ်..
welcome to anonymous..!
we don't need to mention our name and symbol..
bcos we don't need it anything from mentioned-name..
we just want to give you some opinions..
so you don't take it personally for NAMES..
it's not business...
it's just Non-sense club..
so never ever don't beg for NAME..!
Anonymous doesn't matter for you...
U'll just read the Comments..and take it or keep it..or learn it..!
Be mature, Grow-up and Wide your small eyes..!
sorry you been beaten up left, right and centre.
and i know that you just want to demonstrate free speech and all but..... would you mind delete some of those Anon comments.
you don't want to delete them because they will say you delete bad things about you.
but i don't findareason to tolerate vulgarity. ( unfortunately, which can be found quite abundantly among our fellow country men ) :(
"so never ever don't beg for NAME..!"
never+don't beg = pls beg ??? :)
"Never" ကို မကြည့်ရပါဘူး..သူက Ever ရဲ့ အထူးပြုပါ. Ever ကိုသာ ကြည့်ရပါသည်။ ဟူး..ဝေးတာ..
Anonymous ဘာဆိုလိုတယ် ဆိုတာ ဖတ်သူတိုင်း သိပါတယ် ttkm.
အရမ်းကိုeကောင်းနေရင် ပိဋကတ် (၃) ပုံ ဘာသာသွားပြန်ပါ့လား..
'ငထုံ ' ဆိုတဲ့အတိုင်းထုံပါပေတယ်။
ဘလောက်ကို လာဖတ်တဲ့သူတွေများတယ်ဆိုပြီးတော့များ အားပေးတဲ့သူ၊ ထောက်ခံတဲ့လူများတယ်လို.တော့ မထင်စေလို ။ တစ်ချို.ကတော့ကြိုက်လို. ၊ ထောက်ခံလို. ၊ အားပေးချင်လို. ။ တစ်ချို.ကတော့ အပျင်းပြေ ၊ တစ်ချို.ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် အင်တာနက်ပေါ်ရောက်ရင် ထုံးစံအတိုင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ။
အေး.........ငါတို.ကတော့ ဒီစောက်ထုံ "ငပေါ".........ဘာတွေများ လေကျယ်ထားသလဲဆိုပြီးဝင်ကြည့်တာ ။ တစ်ယောက်ဝေဖန်ထားသလိုဘဲ......."နည်းနည်းလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးတာရယ် ၊ သူများကို အထင်နည်းနည်းလေးသေးတတ်တာရယ်" ဆိုသလိုပေါ့ တကယ်တမ်းမညှာမတာ ပြောရစတမ်းဆိုရင် မင်းရဲ.စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်ပြည့်ဝမှုကြောင့် နောက်နောင် မင်းဦးဆောင်တဲ့ပွဲဆိုရင် သူများတွေတော့ မသိ ၊ ငါတို.ကတော့ Sorry ပဲ ။ စောင့်ကြည့်နေပါ။ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားကြသော်ငြား မင်းလိုငါတစ်ကော,ကော ။ ငါ့စကားနွားရ ကောင်မျိုးတွေကြောင့် စိတ်ပျက်သွားသူ ဘယ်လောက်များ ရှိနေမယ် မသိနိုင် ။
To above anon,June 9, 2009 12:57 PM, I would like to quote this two comments for you.
အရင်ပို့စ်ကတည်းက သတိထားမိနေတယ်။ ကွန်မန့်ထဲမှာမရောင်ရာ ဆီလူးကြတာ အတော်များတာပဲ။ ပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့ကဘာလဲ အဲဒါကိုယူမယ်။ စာရေးသူလဲ သူမှားတာ မှားမှန်း ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရေးတာပဲ။ ဒါဘာဆန်းလဲ? အချို့သူတွေအနေနဲ့လဲ ငါ့များပြောတာလားလို့ တွေးပြီး မလုံမလဲဖြစ်စရာမလိုပါ။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လဲ ပွဲတိုင်းလိုက်မနွှဲပါ၊ မနွှဲနိုင်ပါ။ ယခုပွဲလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် မပါခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် ငါ့များစောင်းပြောနေလားလို့ မခံစားရပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ပြသနာနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်ခံယူချက်ကိုယ်ရှိပါတယ်။ If your conscience is clear; so long as you have justification for your action, stay silent! Accept the reality and no more rebuke please. ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ မတရားတာကို ဆန့်ကျင်တဲ့အသိရှိမယ်။ အခြေအနေပေးရင်ပေးသလို ပါဝင်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ အသိရှိရင် လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ ပဲနေလိုက်ကြပါ။ စာရေးသူဆိုလိုတာက တာဝန်မဲ့နေသူများကိုပဲ တာဝန်သိစိတ်လေး နဲနဲရှိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒကိုဖေါ်ပြတယ်လို့ပဲ ခံယူလိုက်ပါ။ ဒါဆိုအငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါ။
June 3, 2009 3:38 AM
အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာနဲ့ တထပ်ထဲပါဘဲ။
ခက်တာက တချို့လူတွေက ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်မလုံကြလေတော့ ပြဿနာပေါ့ဗျာ။
ဒီလို နိုင်ငံရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ ပွဲတွေမှာ မချီးမွမ်းချင်နေ ( နိုင်ငံသား တယောက် သူလုပ်ရမယ့် အလုပ် သူလုပ်နေတာမို့ ချီးမွမ်းစရာမလိုပါ။) မကဲ့ရဲ့မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာ.. "အန်တီစုရော လွတ်မြောက်ပြီလား ခင်ဗျာ..." ဆိုတာမျိုး။ ဘယ်သူ ကို မကြိုက်လို့၊ ဘယ်သူ ဦးဆောင်လို့၊ ဘယ်သူ ရဲ့စည်းရုံးရေးက မကောင်းလို့၊ ဘယ်သူ နဲ့ ဖြင့်တွဲမသွား ချင်လို့…စသဖြင့် လျှာအရိုးမရှိရေးနေသူများ ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း ကိုယ် အထီးမှန်း အမမှန်းသိပါစေ။ ( နအဖ လူ ဆိုရင်တော့ ဘာမှပြောစရာမရှိပါ။)
စည်းရုံးရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင်..မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ ( အထူးသဖြင့် ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေးဟာ) အထူးတလည် ထပ်မံစည်းရုံးစရာမလိုအပ်တဲ့၊ ပါဝင်တဲ့နေရာမှာ ချေးများနေဖို့မဖြစ်သင့်တဲ့ ၊ နိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်သင့်တဲ့အရေးမှန်း လူတိုင်း နီးပါးသိပြီးသားပါ။
‘ဘာကြောင့် ကိုယ်မပါဝင်နိုင်သေးတာလဲ ’. .ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကိုယ့်ဘာသာအရိုးသားဆုံးပြန်ဖြေကြည့်ပြီး..ကိုယ့် ကို ကာရံထားတဲ့ တံတိုင်းတွေ၊ ကိုယ် ပိတ်မိနေတဲ့ တံတိုင်းတွေ ကို ကိုယ့်ဘာသာဘဲခြေဖျက်နိုင်ကြပါစေ။ အရိုးသားဆုံးဖြေ မှ ကိုယ့် ကို ကာရံထားတဲ့ တံတိုင်းအမှန်ကိုသိနိုင်မယ်..ဒါမှလည်း ခြေဖျက်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မယ်။ ဒါပါဘဲ။
ကိုပေါရဲ့ ဆောငိပုဒ်က ကြိမ်စာဝလေ မောင်လှလေ ထင်ပါတယ်.... အရေထူပုံပဲ...
ပြောချင်ရာသာပြောပါ ။ ငပေါ တော့တော်ပါပြီ ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမည့်သူဆိုတာကတော့ ဒီလိုအရေးအသားမျိုး ၊ ဒီလိုသူများတစ်ကာကို လိုက်ပြီးလက်ညှိုးထိုး၊သူများတစ်ကာကို အပြစ်မြင်တတ်သူမျိုးနဲ.တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ ။ စည်းရုံးရေးဆိုတာဒီလိုလုပ်လို.မရပါဟုသာ ဆိုလိုပါကြောင်း။
Su... ကွန်မင့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို ဝေဖန်တာ ခံနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့်တဦးတည်းအတွက်ကတော့ ဆဲတာကိုလည်း မမှုလှပါဘူး။ တချို့ကတော့ ပို့စ်ကို မကြိုက်တဲ့အတွက် ရိုးရိုးသားသား တခါတရံ ဆိုသလိုမျိုး ၀င်ဆဲတာလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ကွန်မင့်တွေကို ကျနော်မဖျက်တာ သူတို့ ဝေဖန်မှာကို စိုးရိမ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်လူတိုင်းကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားစေချင်တယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို ကိုယ်တာဝန်ယူပြီး ပြောစေချင်တဲ့အတွက် အလေ့အကျင့်ရအောင် တမင်လွှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မဆိုင်သူတွေရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေပါ ဖော်ပြီး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရေးတဲ့ ကွန်မင့်တွေကို ကျနော်ချက်ချင်းဖျက်မှာပါ။
တချို့သော အမည်မသိ ကွန်မင့်တွေဟာ ပို့စ်မှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ မစပ်ဆိုင်လှပဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ တမင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရုံသက်သက် လာရေးနေကြတာကို သတိထားမိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတဲ့မှတ်ချက်တွေဆိုရင် အမည်မသိ နာမည်ခံထားပေမယ့် တဦးတယောက်တည်းက ရေးနေတယ်ဆိုတာ သူ့အရေးအသားနဲ့ ဝေါဟာရ အကန့်အသတ်ကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း စာဖတ်သူအများစုရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို ကျနော်ယုံကြည်တယ်။ အဲသည်အတွက် သည်အနှောက်အယှက်တွေကို ကြာရင် စာဖတ်သူက အလိုအလျောက် ကျော်လွှားဖတ်သွားကြမယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း အရေးထားပြီး တုန့်ပြန်နေမှာ မဟုတ်တော့ရင် အလိုအလျောက် သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကျဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုပေါက ငါတို့ကို အလေ့အကျင့်ရအောင် လေ့ကျင့်ပေးနေတယ် ဆိုပါလား..... ကိုယ့် အဆင့်နဲ့ တန်ရာတန်ရာ မပြောဘူး.... လေ့ကျင့်ခန်းဆက်ဆင်းကျ idiots တွေ.. ငါ့တော့ သူလက်ဆင်တွေရွံ လို့ ပြေးပြီး......
မပြေးပါနဲ. ပေါဘောမ ရယ် ။ အဲလောက်လည်း အလေးအနက်မထားပါနဲ. ။ အပျင်းပြေပေါ့ကွာ။ ဒီငပေါ ကအဲလိုအပျင်းပြေလို. သဘောထားမှဘဲဖြစ်တော့မှာကွ။ ဘယ့်နှယ်ကြုံဘူးပေါင်ကွာ ။ ဒီလောက်ဘဝင်လေဟပ်နေတဲ့ ဘလောက်ဂါမျိုးကို ။ အံ့ဩပါရဲ.ကွာ ။ စောက်ကျိုးနဲ...........။ ဒီငပေါဘလောက်ကို ဖတ်ပြီး"ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီ"ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီငပေါလိုကောင်တွေကို စိတ်ပျက်သွားတဲ့သူ ဘယ်လောက်များရှိနေမယ်မသိတော့ပါဘူးကွာ။
" အေး.........ငါတို.ကတော့ ဒီစောက်ထုံ "ငပေါ".........ဘာတွေများ လေကျယ်ထားသလဲဆိုပြီးဝင်ကြည့်တာ ။ တစ်ယောက်ဝေဖန်ထားသလိုဘဲ......."
အဲဒီစာကြောင်းကို ထောက်ခံပါကြောင်း ..
သူတို့ကွန်မင့်တွေကို ကျနော်မဖျက်တာ သူတို့ ဝေဖန်မှာကို စိုးရိမ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ .............အလေ့အကျင့်ရအောင် တမင်လွှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
.........အင်္ဂလိပ်လို ရေးတဲ့မှတ်ချက်တွေဆိုရင် အမည်မသိ နာမည်ခံထားပေမယ့် တဦးတယောက်တည်းက ရေးနေတယ်ဆိုတာ သူ့အရေးအသားနဲ့ ဝေါဟာရ အကန့်အသတ်ကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။.......
....... we don't need to mention our name and symbol..
ကိုပေါရဲ့ စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်ပြည့်ဝမှုကို လေးစားပါကြောင်း :P
I am very very upset to you since JJ's impolite songs case.
so bad. Over acting
may be you are not REAL RIT . get B.E degree by moderation? also get NTU master by part-time. moderation part-time.
"CHEE BRAIN" har har